Xurree... Archives - Page 2 of 3 - Ibsaa Jireenyaa
October 26, 2016 Sammubani One comment
Waan namoonni si miidhaniifi mitii waan ati namoota miitef dhiphadhu. Sababni isaas yommuu namoonni si miidhan ajrii (mindaa) argatta. Namtichi yommuu towbate fi ati araaramtuuf Rabbiin mindaa siif kataba. Namtichi osoo hin toowbatin yoo du’e immoo boru Guyyaa Qiyaama harka kee ni kafalatta. Cunqursaan hin jiru, mizaana haqaatu dhaabbata. Garuu ati yoo nama miite fi osoo hin towbatiin duute adabbii argatta, hojiin gaariin(hasanaanni) tee nama saniif kennamti. Kanaafu arrabaan, harkaan fi karaa adda addaatin nama miite yoo jiraate yeroon towbadhu, araarama gaafadhu.Yoo araarama gaafachuun sitti ulfaate hojii gaggaari baay’isi hojjadhu. Read more
Hanga fedhan namoonni cubbuu/badii haa raawwatan, isaan hin hordofin hin akkeessin. Namoonni baay’een sababa akkeessutin cubbuutti kufu. Akkana siin jechuu danda’u,”Namni hunduu jaalalle dubartii/dhiiraa qaba. Kana namni hunduu ni hojjata. Ati nama addaati? Dargaggummaa keetti fayyadami. Yoo amma of hin bashanansiisin yoom of bashanansiisuf? Rakkoo hin qabu boodarra ni tawbatta, Rabbiin gafurrahimi….” Hanga isaan hordoftu haala kanaan si sossobu. Namoonni kunniin sheyxaana namaati irraa garagali,wanta isaan jedhan gonkumaa hin dhagahin. Read more
Dubbii madaalawa- akkuma baay’iste dubbattuun akkasuma boqonnaa sammuu dhabda. Sammuun oduu hin barbaachisneen ni qisaasa’a. Yommuu nama tokko hamannu ykn maqaa balleessinu gammachu waan argannu nutti fakkaata garuu jireenya keenya balleessa fi cubbuu keessatti borcamaa jirra. Yeroo muraasan booda gaabbi laalessaa fi gadda nutti fida. Hamni fi maqaa balleessun jibbaafi shakkii qalbii keenya irratti darba. Ergasi wanta nu hin galchineef ni dhiphanna, boqonnaa sammuu ni dhabna. Read more